Baydhabo oo ergooyin hor leh ku biirayaan shirka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Baydhabo oo ergooyin hor leh ku biirayaan shirka
Baydhabo oo ergooyin hor leh ku biirayaan shirka
Wararka laga helayo Baydhabo ayaa sheegaya in shirweynaha maammul u sameynta gobollada koofur galbeed Soomaaliya uu imminka gelay heerkii ugu danbeeyay waxayna u badan tahay in dhowaan la soo gebaggebeeyo, maadaama ay magaaladaasi ku sii qulqulayaan ergooyin kala duwan oo doonaya inay ka qayb galaan xafladda lagu soo afmeerayo guud ahaan shirkaasi.
Baydhabo waxaa horey ugu sugnaa wefdi isugu jira xildhibaanno iyo wasiiro ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanadaasi, kuwaasoo gacan ka siinaya guddiga farsamada ee dhismaha maammulka oo muddooyinkaani danbe hawlo dib u heshiisiineed ka waday gudaha magaaladaasi si loo hirgeliyo dawlad gobolleed ay u dhan yihiin mujtamaca gobolladaasi.
Wasiir ku xigeenka amniga, Ibraahiim Isaaq Yarow oo u hadlayay masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ugu xilsaaran fududeynta shirkaasi ayaa u xaqiijiyay bulshada reer Baydhabo in ka dawlad ahaan ay ka go’an tahay dhaqan gelinta maammulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale, Ibraahiim Isaaq Yarow ayaa uga digay siyaasiyiintu in aysan ku kicin falal khatar gelinaya nabadda iyo ammaanka magaalada wuxuuna ugu baaqay inay taageeraan maammulka la dhisayo.
Previous articleBurundi oo dib u baaraysa eedeyn loo jeediyay
Next articleBuuloburde: faahfaahin ka soo baxaysa dagaalkii